WINDOWS 10 ကိုအတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်အချိန်ကန့်သတ် - WINDOWS ကို - 2019
Windows 10 ကိုအတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်အချိန်ကန့်သတ်
Windows ကို 10 တှငျအခြို့သောဆိုဒ်များကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်ထားအဖြစ်, ပရိုဂရမ်ကို run, ဒီအပေါ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုကိုအချိန်ကန့်သတ်ခွင့်ပြုကြောင်းမိဘထိန်းချုပ်မှု features တွေကိုထောက်ပံ့ပေး, ငါသည်သင်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာကန့်သတ်အလုပ်ကိုအချိန် setting များအတွက်ဆိုပါတယ်ပစ္စည်းသုံးနိုင်ပါသည် (မိဘထိန်းချုပ်ရေး Windows 10 ကိုဆောင်းပါးရေးသားခဲ့သည် မိသားစုဝင်များသငျသညျကိုအောကျတှငျဖျောပွထားသညျ့ရှုပ်ထွေးတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟုတျပါလျှင်) ။
ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာ, ထိုကဲ့သို့သောကန့်သတ်သာ Microsoft account တစ်ခုမဟုတ်ဘဲဒေသခံတစ်ဦးအကောင့်အတွက် configured နိုင်ပါသည်။ တဦးတယောက်တည်းကပိုအရာ: သင်ထိန်းချုပ်ထားသောအကောင့်ကလေး၏အကောင့်သွားလျှင်တွေ့ရှိခဲ့နှင့်အတွင်း Windows 10 ကိုမိဘထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုစစ်ဆေးနေသည့်အခါ - သင့်အကောင့်ဆက်တင်နှင့်အစားကို Microsoft အကောင့်ဒေသခံအကောင့်ကို enable, မိဘထိန်းချုပ်မှုအလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ password ကိုခန့်မှန်းဖို့ကြိုးစားပါတယ်လျှင်ကိုလည်းကြည့်ပါ, Windows 10 ကိုပိတ်ဆို့ဖို့ဘယ်လို :. ။
ဒီညွှန်ကြားချက်တွင် - က command line ကနေဒေသခံတစ်ဦးအကောင့်က Windows 10 running ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၏အသုံးပြုမှုကိုအချိန်ဘယ်လောက်။ အလုပ်မလုပ်ပါဘူးဒီနည်းလမ်းကိုအားဖြင့်ပရိုဂရမ်ကွပ်မျက်သို့မဟုတ်အချို့သောက်ဘ်ဆိုက်များသို့သွားရောက်ခြင်း (အဖြစ်သူတို့အပေါ်မှာအစီရင်ခံစာခံယူ) တားမြစ်ပါကမိဘအထိန်းချုပ်မှု, Third-party software များ, နှင့် built-in system ကို tools တွေကိုတချို့၏များ၏အကူအညီဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ဆိုဒ်များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းနဲ့ Windows အစီအစဉ်များအားဖြင့် run ၏ခေါင်းစဉ်တွင် (ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ဤဆောင်းပါးကိုအတွက်သီးခြားအစီအစဉ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်၏တားမြစ်ချက်) အရင်ကဆိုရင်များအတွက်က်ဘ်ဆိုက်, ဒေသခံ Group Policy Editor ကိုပိတျဆို့ဖို့ဘယ်လိုအသုံးဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
10 မှာ Windows ဒေသခံအကောင့်ဖို့အချိန်အလုပ်လုပ်ချိန်ညှိခြင်းကန့်သတ်
စတင်ရန်, သင်ကန့်သတ်သတ်မှတ်ထားပါလိမ့်မည်သည့်အဘို့ဒေသခံတစ်ဦးအသုံးပြုသူ (Non-စီမံခန့်ခွဲသူ) အကောင့်လိုအပ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပြုလုပ်ဖန်တီးပါ:
Start - Settings - Accounts ကို - မိသားစုနှင့်အခြားသူများကို။
"အခြားအသုံးပြုသူများသည်" အောက်မှာ "ဒီကွန်ပျူတာများအတွက်အသုံးပြုသူ Add on" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
တောင်းဆိုချက်မေးလ်ထဲမှာလိပ်စာများကို "ကျွန်မဒီလူကိုရိုက်ထည့်ရန်မဒေတာရှိသည်။ " ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
လာမယ့် window ထဲတွင် "ဟု Microsoft ကအကောင့်မရှိဘဲအသုံးပြုသူထည့်ပါ။ " ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
အသုံးပြုသူနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ဖြည့်ပါ။
အုပ်ချုပ်သူအဖြစ် command prompt ကိုဖွင့်လှစ်, စီမံခန့်ခွဲသူအခွင့်ထူးနှင့်အတူအကောင့်တစ်ခု၏ကန့်သတ်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်တပ်ဆင်ခြေလှမ်းများအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကို (ဒီက "Start ကို" ခလုတ်ကိုပေါ်တွင် Right-click နှိပ်ပြီး menu ကနေတစ်ဆင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်) ။
အောက်ပါအတိုင်းအမိန့်, အသုံးပြုသူကို Windows 10 ရက်နေ့တွင် log နိုင်တဲ့အခါအချိန်ကိုမသတ်မှတ်ဖို့အသုံးပြု:
ပိုက်ကွန်ကိုအသုံးပြုသူအသုံးပြုသူအမည် / အချိန်: နေ့, အချိန်
ဒီ command များတွင်:
user name - ထိုကန့်သတ်သတ်မှတ်ထားသည့်အဘို့ကို Windows 10 အသုံးပြုသူအကောင့်အမည်ဖြစ်တယ်။
နေ့ - သင်ရိုက်ထည့်နိုင်သည့်အတွက်တစ်ရက်သို့မဟုတ်ရက်ပေါင်းခုနစ်ရက် (သို့မဟုတ်အကွာအဝေး) ။ အသုံးပြုမှုအင်္ဂလိပ်နေ့ရက်ကာလအဘို့အတိုကောက် (သို့မဟုတ်မိမိတို့၏အပြည့်အဝအမည်များ): M က, T, W, Th, F, Sa, စု (တနင်္လာနေ့ - အသီးသီးနင်္ဂနွေနေ့) ။
အချိန် - နာရီအတွက်အချိန်အကွာအဝေး: MM ဥပမာ 14: 00: 00-18
ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်, သင်အသုံးပြုသူ remontka 19 မှ 21 နာရီကနေ, သာညနေခင်းတွင်ထိုရက်သတ္တပတ်၏မည်သည့်နေ့၏ input ကိုကန့်သတ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကျနော်တို့ command ကိုသုံး
ပိုက်ကွန်ကိုအသုံးပြုသူ remontka / အချိန်: က M-စု, 19: 00-21: 00
ကျွန်တော်တစ်ဦးအနည်းငယ်ပ္ပံမေးမြန်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဥပမာ, ဝင်ပေါက်တနင်္လာနေ့ကနေသောကြာနေ့မှအသက် 19 ကနေ 21 မှဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ပြီး, တနင်္ဂနွေ -7နံနက်ကနေ 21 နာရီအထိအောက်ပါအတိုင်းသကဲ့သို့, command ကိုစာဖြင့်ရေးသားနိုင်ပါတယ်:
ပိုက်ကွန်ကိုအသုံးပြုသူ remontka / အချိန်: က M-F ကို, 19: 00-21: 00; စု, 07: 00-21: 00
သငျသညျအဖွဲ့၏ထံမှကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ပမာဏကိုရိုက်ထည့်တဲ့အခါ, အသုံးပြုသူမက်ဆေ့ခ်ျကိုမြင်ရပါလိမ့်မည် "သင်ယခုကြောင့်သင့်အကောင့်ရဲ့ကန့်သတ်နိုင်ဖို့စနစ်သို့မဝငျနိုငျသညျ။ နောက်တခါထပ်ကြိုးစားကြည့်ပါ။ "
, သင့်အကောင့်နဲ့အားလုံးကန့်သတ်ဖယ်ရှားလိုက်ပါက command ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် ပိုက်ကွန်ကိုအသုံးပြုသူအသုံးပြုသူအမည် / အချိန်: အယ်လ်စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ် command prompt ကိုမှာဌ။
ဤတွင်, ဖြစ်ကောင်း, Window logon ကို disable လုပ်ဖို့ဘယ်လောက်၏ဆောင်ပုဒ်ပေါ်မှာရှိသမျှအချိန်တခုခုမှာမိဘထိန်းချုပ်မှုမပါဘဲက Windows 10 နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့အင်္ဂါရပ် - Windows 10 ကိုအသုံးပြုသူ (kiosk မုဒ်) ကို run နိုင်သည့်တစ်ဦးတည်းသာလျှောက်လွှာ, Install လုပ်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါသင်တို့သည်ဤကန့်သတ်သတ်မှတ်ထားရာများအတွက်အသုံးပြုသူအလုံအလောက် smyshlen နှင့် Google နဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ျာမေးခွန်းများကိုမေးရန်ကိုဘယ်လိုသိတယ်လျှင်သူတစ်ဦးကကွန်ပျူတာသုံးစွဲဖို့နည်းလမ်းရှာနိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းသတိပြုပါ။ စကားဝှက်မိဘထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အလားတူအစီအစဉ်များကို - ဤအိမ်မှာကွန်ပျူတာထိုကဲ့သို့သောတားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုနီးပါးမည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်သက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
ဗီဒီယို Watch: Обзор Windows 10 April 2019 Update RTM (နိုဝင်ဘာလ 2019).